29 August 2015 9:48
Weerarka Muqdisho iyo War la�aanta Jubooyinka iyo Gedo 31/10/2012
Muddo ku dhow-dhow 22 sano Soomaaliya waxaa ka taagnaa dagaal Sokeeye, bililiqo iyo waliba ururo mudnaan ku raadinaya gumaadkii shacabka. Dhibaatada dalka ka jirta kolba heer bay soo taagnayd, ka sokow duulaamada isir gumaadka ah ee lagu qaaday qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed laguna laayay kumanaan, in badana la barakiciyay hantidoodina la qaatay, waxaa ayadana timid in qaab beeleed loo qaybsaday kaabayaashii dhaqaalaha.
Waxaa la dhoofsaday taalooyinkii astaanta u ahaa halyeeyadii wadanka u soo halgamay sida Sayid Maxamed Cabdille Xasan, Axmad Guray, Xaawa Taako, SYL, iwm. Waxaa la dagay dhamaanba dhismayaashii iyo xafiisyadii qaranka, waxaa lala wareegay guryihii, beerihii iyo hantidii dadku lahaa.
Dhammaanba madaxwaynayaashii wadanku soo maray waqtigii burburka waxay ahaayeen mid mooyee kuwo ka soo jeeda hal beel. Ujeedada ka dambaysana waxay ahayd bal in beeshatan lagu lagu sasabo xafiiska ugu sareeya dalka si uu xal u yimaado- waxaa la isku afgartay in xal la doono ee aan xaq la doonin .
Hadaba su�aashu waxay tahay Beeshii ugu tunka waynayd beelaha, gacantoodana uu ku dhacay hubkii ugu badnaa ee dowladii militariga ahayd xaggay Soomaali gaysay? Waxay dalka u horseedeen hoog iyo halaag.
Xamar oo mar ahayd caasimadii qaranka ayaa hadda noqotay godad dadka lagu qasho, dadka ayaa maalin cad lagu afduubtaa, waxaa la daydayaa, la dilaa dadka guryahooda la haysto haday Muqdisho-ba cag soo saaraan. War yaa caasimad ka dhigan kara magaalo noocaas ah? Yaase wax la wadaagi kara dad noocaas ah? Jawaabtu waa ninna.
Waxaan maqli jiray xigmad oronaysa �necessity is the mother of invention` oo la micno ah daruufta adagi waa hooyada isbadalka. Marka laga soo tago Somaliland oo sheegatay gooni isu taag, waxaa isku tashi goboleed samaysatay Puntland, dadaal bandanna u gashay in wadanku yeesho maamul goboleedyo ku dhaqma habka federalism-ka oo markaas la isugi yimaado maamul dhexe.
Dhaxalka ugu wanaagsan ee laga dhaxlay Allaha u naxariistee Madaxwayne Cabdullaahi Yusuf ayaa lagu tilmaami karaa nidaamka Federalka ah ee maanta ka curtay dalka Soomaaliya.
Maxay tahay ujeedada ka dambaysa in federal la qaato? Ujeedadu waa in laga badbaado dhibaatada ay abuurayaan dad aan dowlad rabin, kala dambayn rabin, doonaya in lagu sii jiro fowdada si aan loola xisaabtamin. Dad doonaya inay maalinba meel nabada ku duulaan soona bililiqaystaan. Ganacsato xaaraan ku naax ah iyo kuwo lagu sheego odayaal dhaqameed oo qaarkood guryo dad leeyahay daggan.
Dagaal ka dhan ah Jubaland.
Madaxwaynaha Soomaaliya, beeshiisa iyo Jawaarey oo ay baryahan olog noqdeen ayaa si cad isu hor istaagay maamulka loo yagleelayo gobolada Jubooyinka iyo Gedo. Maxay tahay sababtu? Waxay sheegaysaa xog-hoose oo aan helnay inay madaxwaynaha beeshiisu uga digtay inuusan ogolaanin wax la yiraahdo Jubaland State oo haday hirgasho khatar ku ah danaha beeshooda. Xasan Garguurte wuu qaatay taladii gurracnayd ee ay adeeradii u soo jeediyeen.
Sayid Maxamed Cabdille Xasan ayaa waxaa u goodiyay nin la oron jiray ina Cali Shire, markii uu maqlay ayuu biciidsaday hanjabaadda ninkaas markaasuu yiri:
Ina Caliga dhaaranahayaa dhoohanoow falane.
Hadalkiisa dhiicada leh buu nagu dhaleecayne.
Dhoodkiisa iyo faanku waa dhuusa tuug ridaye.
Ninbaa hadda ka hor waxaa laga sheegay Hadal nin hoos iigu dhiga oon halaagmin hor loo waa.
IGAD-da taangiga ku waardiyaysa Garguurte ee isaga ka ilaalinaysa kuwii ay ehel ahaan dad isugu xigeen, shaqada geysa kana soo celisa, isla IGAD-dii umbaa Jubaland-na joogta, kuna garab istaagtay ciidamadii deegaanka u dhashay xoraynta gobolkooda, meesha shacabka Xamar ay taageerayeen argagixisadii ku soo duushay Jubaland. Dastuurkayna ku caddahay in ay maamul goboleed dhisan karaan laba gobol iyo wixii ka badan, howsha maamul u dhisiddana ay u taallo dadka deegaanka oo taas cidna marti loogama aha.
Xasanoow tani kuu socon maysee, mooryaanta dabada kaa soo riixaysa meel kale wax uga gacma gacmee. Jawaareyna waxaan leeyahay hadaadan feejignaan markaagay ku heli.Saacid-na waxaa leeyahay ha noqon markhaati beenaalihii labada dhanba laga ogaa.
Oore Dooyle. Doy2012@hotmail.com